AKWỤKWỌ JUDITH TYBERG
1902 (May 16): Tyberg mụrụ na Point Loma, California.
1920: Tyberg malitere ịmụ maka nzere bachelọ na Mahadum Theosophical, Point Loma, California.
1921: Tyberg sonyeere Theosophical Society nke dị na Point Loma, California.
1922–1934: Tyberg kụziri akara mmụta dị ala na Raja Yoga School, Point Loma, California.
1929: Tyberg nwetara nzere bachelọ na Mahadum Theosophical.
1929–1943: Tyberg gụrụ akwụkwọ Sanskrit na Hindu na Gottfried de Purucker, onye isi nke Theosophical Society na Point Loma.
1932: Tyberg nwetara nzere bachelọ nke Theosophy na Mahadum Theosophical.
1932–1935: Tyberg jere ozi dị ka osote onye isi, ụlọ akwụkwọ Raja Yoga na Point Loma.
1934–1940: Tyberg kuziri ụlọ akwụkwọ sekọndrị na Raja Yoga School.
1934: Tyberg nwetara akara ugo mmụta nke Theosophy na Mahadum Theosophical.
1935: Tyberg natara akara ugo mmụta Master na Mahadum Theosophical.
1935–1945: Tyberg jere ozi dị ka Dean of Studies na Mahadum Theosophical.
1935–1936: Tyberg gara ọtụtụ mba Europe iji bulie ndị otu Theosophical na ọrụ ha, ọ kụzikwaara ndị nwere mmasị Sanskrit.
1937–1946: Tyberg nyere edemede na nyocha akwụkwọ Theosophical Forum, akwụkwọ akụkọ kwa ọnwa nke echiche nke Point Loma Theosophical community bipụtara.
1940: Tyberg ghọrọ Onye isi nke Sanskrit na Oriental Division nke Mahadum Theosophical.
1940: Tyberg ghọrọ onye otu American Oriental Society.
1940: Tyberg bipụtara mbipụta mbụ nke Igodo Sanskrit nye Okpukpe Amamihe.
1944: Tyberg nwetara akara ugo mmụta doctorate na Mahadum Theosophical.
1946: Tyberg gbara arụkwaghịm dị ka Onye Nlekọta nke Mahadum Theosophical ma hapụ Theosophical Society (nke dị ugbu a na Covina, California) maka esemokwu ndị isi.
1946–1947: Tyberg biri n’adabereghị na nzukọ ọ bụla na Los Angeles, California. Ọ kwadoro onwe ya site na ire akwụkwọ, ịgwa ndị otu okwu, na nkuzi.
1947: Tyberg gara India iji mụọ na Banaras Hindu University.
1947 (August 15): Tyberg nọ maka emume nke nnwere onwe nke India.
1947: Tyberg nwere darshan mbụ ya na Sri Aurobindo na Mirra Alfassa (mama) na ashram na Pondicherry, India.
1949: Tyberg nwetara nzere Master na Hindu Religion na Philosophy na Mahadum Banaras Hindu.
1950: Tyberg laghachiri United States wee kwuo okwu ihu ọha.
1951: Tyberg ghọrọ Prọfesọ nke Okpukpe India na Nkà Ihe Ọmụma na American Academy of Asia Studies, San Francisco, California.
1951: Tyberg bipụtara Nkuzi izizi na asusu Grammar na Sanskrit.
1953: Tyberg guzobere East-West Cultural Center na Los Angeles.
1953–1973: Tyberg hibere ụlọ akwụkwọ East-West Cultural Center maka ụmụ aka nwere ọgụgụ isi, nke rụrụ ọrụ afọ iri abụọ.
1970: Tyberg bipụtara Asụsụ nke Chi: Sanskrit Igodo nke Amamihe India.
1973-1976: Tyberg kụziri ihe ọmụmụ na Sanskrit, okpukpe India, nkà ihe ọmụma na akwụkwọ, na echiche Sri Aurobindo, na College (Mahadum mechara) nke Oriental Studies na Los Angeles; o jekwara ozi dị ka Dean nke Undergraduate School, College of Oriental Studies.
1976: Tyberg jere ozi dị ka onye nkuzi ngalaba maka alaka ụlọ akwụkwọ Goddard Graduate nke Los Angeles, Goddard College, Plainfield, Vermont.
1977: Ebe Ọdịbendị nke Ọwụwa Anyanwụ-West ghọrọ ụgwọ na-enweghị ụgwọ. Centerlọ Ọrụ ahụ mechara bụrụ Sri Aurobindo Center nke Los Angeles na East-West Cultural Center
1980 (October 3): Tyberg nwụrụ na Los Angeles, California.
Judith Tyberg [Foto dị n'aka nri] bụ onye ọcha America nke amụrụ na Theosophical community nke Point Loma (nke a na-akpọkwa Lomaland), na San Diego, California. Ndị mụrụ ya bụ Marjorie M. Somerville Tyberg si Ontario, Canada na Oluf Tyberg si Denmark. Ọbụghị naanị na etolitere ụmụaka na Point Loma, ha kụkwara akwụkwọ ebe ahụ. Ọtụtụ ndị Theosophists bịara ibi ebe ahụ tozuru oke ịkụzi ọtụtụ isiokwu na ọkwa ọkwa niile, gụnyere mgbakọ na mwepụ, akụkọ ihe mere eme, akwụkwọ, na egwu. Nanị mpaghara dị mkpa na usoro ọmụmụ nke ụlọ akwụkwọ Point Loma enweghị ike ị nweta ndị ọrụ bụ sayensị. Tyberg gaara ewere klaasị n'ihe ọmụmụ ndị a niile, nke ya nne Marjorie Tyberg bụ otu n'ime ndị nkuzi kachasị ike. A naghị akụziri ụmụaka Theosophy kpọmkwem. N'oge ahụ, ụsọ mmiri nke Point Loma enweghị ebe obibi, ụmụ akwụkwọ Point Loma nwetụrụ nnwere onwe ịgagharị na mpaghara ahụ, yana ịme njem otu n'ime ime San Diego County. Ọtụtụ ndị gụrụ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ Point Loma, mgbe onye edemede a gbara ajụjụ ọnụ, jiri obi ụtọ leghachi anya azụ n'afọ agụmakwụkwọ ha. Ndị ọzọ nwere ncheta na-adịghị mma banyere Point Loma, n'ihi na ndị nkuzi n'otu n'otu na ndị na-ahụ maka nlekọta n'etiti ndị okenye ahụ anaghị elebara anya nke ọma ma na-ahụ maka mmeso ọjọọ na mmejọ nke ụmụaka na ndị nọ n'afọ iri na ụma, ọkachasị ndị na-ekwenyeghị na ndị obodo chọrọ ka e nwee uche na omume. '' Tyberg adịghị ka ọ so na ndị nwere nsogbu, agbanyeghị. Dị nnọọ iche: ọ nakweere ụkpụrụ nke Point Loma. Dika onye toro eto, ya onwe ya kuziri umuaka ndi ozo, ma nweta otutu ogo site na University of Theosophical nke ndi obodo Point Loma kere iji nye ulo akwukwo ulo akwukwo di elu maka ndi ntorobia ha. Onye ndu nke nọchiri Tingley n’afọ 1929 bụ Gottfried de Purucker (1874–1942), onye polymath kụziri onwe ya nke nwere ike iji ọtụtụ asụsụ oge ochie rụọ ọrụ wee gụọ ebe niile n’oge afọ ya n’obodo. Dị ka onye ndu nke Point Loma, o nyere ọtụtụ narị okwu ihu ọha banyere akụkụ niile nke Theosophy, bụ ndị edegharịrị ma bipụta n'ọtụtụ mpịakọta. N'ime ike ya bụ otu ụlọ ọrụ nwere ọmụmụ ihe na South Asia, Tyberg ghọrọ otu n'ime ụmụ akwụkwọ ọfụma na-amụ Sanskrit, asụsụ nke akụkụ Akwụkwọ Nsọ Hindu oge ochie.
Na 1930s, [Foto dị n'aka nri] mgbe Tyberg ka bụ nwa agbọghọ, ọ gara England, Wales, Germany, Sweden, na Holland ịga leta Theosophists. Ha huru Point Loma dika nne nke ngaghari ha. Ọtụtụ n’ime ha biri na Point Loma. Ebumnuche nke njegharị Tyberg bụ iji gbaa ndị Theosophists ume, ikwu okwu na nzukọ ha, na inye nduzi n'otu n'otu.
N'oge Agha IIwa nke Abụọ, ndị obodo Loma kwagara n'otu ogige dị na Covina, California, na mpaghara Los Angeles. Mgbe de Purucker nwụrụ, kansụl weghaara ibu ọrụ onye ndu. Mgbe agha ahụ bisịrị, ụfọdụ ndị otu obodo kpọbatara Theosophist aha ya bụ Arthur Conger (1872–1951), onye isi ndị agha US ka ọ bụrụ onye ndu ọzọ, n’agbanyeghi na ọ ebighị na Point Loma. Ndị ọzọ ekwetaghị. Otu n’ime ha bụ Tyberg. Oge nsogbu nke mmetụta uche malitere, mgbe ndị otu ndụ nọ n'obodo ahụ na-arụrịta ụka maka ọdịnihu nke usoro ahụ site na ịkwado ma ọ bụ jụ ọgbakọ. N'ikpeazụ ndị na-akwado Conger meriri, na Tyberg hapụrụ obodo, bụ ebe obibi maka ndụ ya niile.
Site na 1946 rue 1947, Tyberg biri na mpaghara Los Angeles, na -ekwu okwu maka ụgwọ na nkà ihe ọmụma na akwụkwọ ndịda South Asia, yana Theosophy, nye ndị otu n'ụlọ ndị mmadụ na ebe ndị ọzọ. O guzobekwara obere ụlọ ahịa na ebe obibi ya. Ọ bụrụ na ndụ ya agbanweghị agbanwe na India, ọ ga-abụ na ọ gaara anọgide na-ebi ma na-arụ ọrụ na Los Angeles ma mesịa chọta isi mmalite nke ego, ikekwe site na nkuzi. O nwetere Ph.D. na Sanskrit si Mahadum Theosophical. Ndị Sanskrit na mahadum dị iche iche agaraghị amata ụlọ akwụkwọ a dị ka ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ziri ezi nke agụmakwụkwọ ka elu; otu o sina dị, nkà na ịdị ukwuu nke ihe ọmụma na ịkụziri Sanskrit bụ nke ndị mmadụ ji nwayọọ nwayọọ na-amata n'etiti ndịda Southern California na-achọ ịmatakwu banyere India, Eshia n'ozuzu, na asụsụ nke ederede okpukpe Asia.
Serendipitously, ohere nyere ya ohere ịga India na 1947 wee debanye aha na Banaras Hindu University na mmemme nzere Master na echiche Indian. Ọ bụghị ihe a na-ahụkarị maka ụmụ nwanyị America ịga Eshia, ọkachasị n'onwe ha. Tyberg bụ ọsụ ụzọ na nke a. Ozugbo ọ gara India, ọ kpọtụụrụ ọtụtụ ndị nkụzi okpukpe, ụfọdụ si India, ndị ọzọ si United States ma ọ bụ Europe. Otu n'ime ndị nkụzi ya na-akụzi nkà ihe ọmụma gwara ya banyere ya Sri Aurobindo (1872–1950), onye isi okpukpe nke biri na ashram na Pondicherry (nke bụ Puducherry ugbu a). Onye bi na ashram bụ nwanyị Europe aha ya Mirra Alfassa (1878–1973), onye ndị olu ya kpọrọ Nne. N'oge mgbụsị akwụkwọ nke 1947, Tyberg si na Benares (nke bụ Varanasi ugbu a) gaa Pondicherry iji nwee darshan (ndị na-ege ntị na mmụọ ma ọ bụ zute metụtara ilele guru ma ọ bụ onye chi ma hụ ya) ya na ndị mmụọ ime mmụọ abụọ a. Ọ gbanwere ndụ Tyberg. O chere na ya emechaala chọta ezigbo ụlọ ime mmụọ ya, ma tinye oge fọdụrụ n'ime ya iji kụzie echiche nke Sri Aurobindo na mama.
Mgbe m gụsịrị akwụkwọ na Mahadum Banaras Hindu, Tyberg laghachiri United States. Na mbu o kuziri ihe na American Academy of Asia Studies (AAAS) na San Francisco. N'oge a, ohere agụmakwụkwọ ole na ole dịịrị ndị America chọrọ ịchụso kpụ ọkụ n'ọnụ ịmụ akụkụ Akwụkwọ Nsọ Asia, nkà ihe ọmụma, na omume. AAAS nwara imezi nke a. Ọ gụnyere n'etiti ngalaba ya bụ Alan Watts (1915–1973), onye amaala onye ode akwụkwọ ama ama ama ama na-ekwukwa ụzọ Asia maka ajụjụ ọgụgụ isi. Ma ụlọ akwụkwọ ahụ enweghị ike ịga n'ihu dịka ọ dị (ọ bụ ezie na nsụgharị ya dị taa dị ka Californialọ Ọrụ Na-ahụ Maka Mmekọrịta Na-ahụ Maka California), na Tyberg hapụrụ. Ọ laghachiri na Los Angeles, ebe ọ nwere ihe ịga nke ọma n'oge gara aga, ma hiwe Centerlọ Ọrụ Ọdịbendị nke East-West. Kemgbe ọtụtụ afọ, Centre ahụ dị n'ọtụtụ adreesị. Taa, ọ dị n'ụlọ dị na Culver City, California. Tyberg nọrọ afọ ndị a n'agbata afọ iri ise na iri asaa na asatọ (mgbe ọ nwụrụ) na-ezi ụmụaka nwere ọgụgụ isi ihe, na-ejide usoro ihe omume maka ọha na eze banyere India na echiche Sri Aurobindo, na ịnye ụdị mmụọ niile sitere na gburugburu ụwa ebe. okwu ihu ọha na / ma ọ bụ igosi. Ebe Ọwụwa Anyanwụ-Ọdịda Anyanwụ ghọrọ ebe ọnụ ọgụgụ buru ibu nke netwọk mba ụwa nke ndị kpọbatara Eshia n'Ebe Ọdịda Anyanwụ tupu ụbọchị iri nke 1960. Tyberg kwadoro ọrụ yiri nke ya. Dịka ọmụmaatụ, College of Oriental Studies (nke a na-akpọ taa Mahadum nke Oriental Studies) gbalịrị imeju oghere nke AAAS gbalịkwara imeju: ịnye ọzụzụ dị elu n'asụsụ Asia na ederede yana ịkwalite ekele maka onyinye ndị Asia na ụwa ọdịbendị.
Ka Tyberg mere agadi, ndị okenye etinyere aka iji nyere ya aka ilekọta Center. Oge ya juputara na nhọpụta nkuzi (ma otu ma ndị mmadụ n'otu n'otu), na-eme atụmatụ mmemme mgbede, na ịga nde nchekasị na-abịa site na ịnwe ụlọ ma ọ bụ ụlọ: ijigide mmiri mmiri, ịhụ mmezi eletriki, ịzụta nri yana ihe maka ndozi ụlọ, wdg. Mgbe ọ nwụrụ na 1980, akwụkwọ ọnwụ ya edepụtara ọtụtụ nsogbu ahụike nke Tyberg gbalịsiri ike na afọ ndụ ya.
Tyberg anwaghị ịmalite njikọ nke ndị na-efe ofufe bụ ndị ga-agaziri ụwa iji mara ụma kwalite nkuzi Sri Aurobindo. Kama nke a, nke a mere n'ụzọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọghọm, dịka ụzọ ndị Point Loma Theosophists siri hụ mgbasa nke ozi nke ha. Maka Tyberg, ịbịaru nghọta Sri Aurobindo bụ usoro miri emi nke onwe, nke mmadụ. Ndị nnukwu onye nkụzi Hindu a metụtara ga-achọzi ịghọta ozizi ya n'ụzọ nke ha. Otú ọ dị, na India, e nwere usoro nlezianya nke ọma nke ụlọ ọrụ na-adabere na echiche ụwa nke Sri Aurobindo na mama m. Nke a bụ obodo agrarian nke Auroville, nke nwere nnukwu mkpa maka ndị na-eso ụzọ gburugburu ụwa. Ọ ga-abụ ntọala maka ụdị ìgwè ọhụrụ nke ndị ọrụ ime mmụọ. Nkuzi mmuta na oru ugbo gara ebe ahu, dika odi rue ta. Tyberg, dị ka ndị ọzọ na-efe ya, kwadoro Auroville, mana o mere nke a site na ịnye ndị mmadụ ga-achọpụta Sri Aurobindo na nke mbụ na East-West Cultural Center, wee mesịa gaa Auroville. N'ime ndị a bụ ụmụ akwụkwọ ole na ole na Chapman College (nke bụ Chapman University ugbu a), ndị na 1960s, dị ka ọtụtụ nde ndị ọzọ na-eto eto, chọrọ ụzọ ọhụrụ iji ghọta ọnọdụ ha n'ụwa site na itinye onwe ha na nkà ihe ọmụma na mmụọ nke Asia. Ha chọtara ụzọ ha na East-West Cultural Center, mgbe ahụ ọtụtụ n'ime ha mechara biri maka oge dị iche iche na Auroville.
Tyberg achọghị mgbe ndị mmadụ toro ya, nke nwere ike inye aka kọwaa ihe mere eji echezọ onye ọ bụla nwere ọgụgụ isi na mmụọ mmụọ mgbe ọ nwụsịrị. Ọ bụ onye ama ama na Southern California, mana ewezuga Centerlọ Ọrụ ya dị obere, ọ nweghị ụlọ ọrụ ọ bụla iji rụọ ọrụ ya, ma hapụ akụkụ nke ederede na-akọwapụta ụwa ya. Nkwupụta okwu ya kachasị ukwuu maka ibipụta ama ama bụ nrụpụta na 1940 nke Igodo Sanskrit nye Okpukpe Amamihe, nchịkọta nke ihe omumu maka imuta Sanskrit na inweta obere ogwu nke Theosophy agwakọtara. Ọtụtụ ndị mechara bụrụ ndị Sanskritist toro Tyberg na ha na-enyere ha aka ịmalite ịmụ asụsụ site na akwụkwọ a.
Nkwenkwe na nkwenkwe Judith Tyberg dabere na Theosophy na n'echiche nke Sri Aurobindo na mama.
Point Loma malitere Katherine Tingley kwuru (1847–1929), onye ndị na-eso ụzọ hụrụ dịka Onye-ndu nke ihe ndị dị n’etiti obodo ebe Mahatmas (lee n’okpuru) bụ nduzi nke mụọ nke ọchịchọ nile nke ndị otu. Tingley mere ka ndị isi na ndị isi ụlọ akwụkwọ Theosophists si United States na Europe kwaga Point Loma. Ha kwenyere na Point Loma bụ ihe ọhụrụ n'akụkọ ihe mere eme mmadụ, obodo nke ga-azụ ọgbọ na-abịanụ ụmụaka [Foto dị n'aka nri] iji were ọnọdụ ha kwesịrị ekwesị dị ka ndị ndu ime mmụọ n'ụwa. Omume ịmụ nwa nke Tyberg ga-abụrịrị na e gosipụtara ya gụnyere ọzụzụ onwe onye, ​​nyocha onwe onye na nyocha mgbe niile maka ebumnobi mmadụ, na ibi ndụ dịka ebumnuche dị elu nke nwere akụkụ ụwa (Ashcraft 2002). Ọtụtụ n'ime ịzụ ụmụaka kwekọrọ n'echiche ndị a ma ama banyere otu esi azụ ụmụaka. A pụrụ ịchọta omume na mkpali ndị yiri nke a n'ụlọ nke ọtụtụ ezinụlọ ndị dara ogbenye n'ofe United States.
The Theosophical Society tọrọ ntọala na 1875 na Ebumnuche Atọ:
Mepụta ntọala nke òtù ụmụnna zuru ụwa ọnụ nke ụmụ mmadụ, na-enweghị ọdịiche nke agbụrụ, nkwenkwe, mmekọahụ, agbụrụ ma ọ bụ agba.
Iji gbaa ume gbasara ọmụmụ ihe, okpukpe, na sayensị.
Iji nyochaa iwu na-akọwaghị ihe banyere okike na ikike latent na mmadụ (Theosophical Society in America ).
Ihe Atọ ndị a bụ ntọala maka mmepe niile e mechara na Theosophical worldviews. Ka mmegharị ahụ gbasaa site na obere ndị otu ya na mbụ wee banye n'ọtụtụ mmegharị metụtara ya, ebumnuche atọ ndị e hotara ebe a gara n'ihu na-akwado ịdị n'otu n'otu gafee ọtụtụ nzukọ. Ndị theosophists, n'agbanyeghị agbanyeghị nhazi ha, kwenyekwara isi ihe odide nke Helena P. Blavatsky (1831–1891). Blavatsky bipụtara nnukwu ọrụ, mana akwụkwọ ya ndị kachasị ewu ewu na ndị a ma ama A kpughere Isis (1877) na Iwu Nzuzo (1888). Site na isi mmalite ndị a niile, enwere ike ịme nchịkọta echiche ndị a nke Theosophical.
Eziokwu niile dị ndụ na njikọta. Ndị ọkà mmụta okpukpe kwenyere na ọbụna mkpụrụ ndụ ndị kasị nta na ihe ndị dị ndụ na-adị ndụ n’ụzọ ụfọdụ bụ́ isi.
Ihe niile na-agbanwe. Ma mmụọ ma ọ bụ ihe ọ bụla na-abụ otu, kama ọ na-agbanwe dị ka usoro dị ka ebighi ebi dị ka cosmos n'onwe ya. Ndị Theosophists, na-enweta ihe ha si na Blavatsky, na-ekwu maka usoro oge: oge ​​buru ibu mgbe ọtụtụ mbara ala, kpakpando, na ụdị dị iche iche na-ebili ma daa, site na mmụọ ruo na ihe, wee laghachi ọzọ. Isi ihe na-egosi ekele maka echiche a na-adabere na mgbanwe evolushọn: ọ na-abụkarị mmekọrịta, mmekọrịta, ọmịiko, na ọnọdụ ime mmụọ ka ukwuu.
Humanmụ mmadụ na-ekere òkè dị mkpa n'ọdịdị nke anyị. Mụ mmadụ adịrịrị otu ụdị ma ọ bụ ọzọ n’ọgbọ na-apụghị ịgụta ọnụ, na-aga n’ihu mgbe niile rue mmezu ka ukwuu.
Ndi mmadu nwere ndi enyemaka, ndi akpo Masters ma obu Mahatmas. Ndi oru a meputara otutu oge nke ihe omuma mmadu di ugbu a, na-egbochi mmegide nke oge na ohere ma na-ewere ihe yiri nke ike. Mana n'eziokwu, ọ bụ naanị na ha gbanwere dịka ụkpụrụ nke oge niile si aga n'ihu n'ụzọ ime mmụọ.
Mmadu nwekwara ike ịdabere na ọtụtụ ọdịnala okpukpe na nke ime mmụọ n'akụkọ ihe mere eme mmadụ iji tụọ aka na eziokwu Theosophical. Ọ bụ ezie na eziokwu ndị a gụnyere akụkọ ifo, akụkọ mgbe ochie, akụkụ Akwụkwọ Nsọ, na obodo ndị yiri ka ha dị iche na ibe ha, n'eziokwu, ndị Theosophists na-arụ ụka, okpukpe niile na mmụọ ime mmụọ na-agbasi mbọ ike iji nweta otu ebumnuche ebighi ebi (Blavatsky 1877, 1880).
Sri Aurobindo dere ọtụtụ ihe mgbe ọ kwagara Pondicherry si Bengal na 1910 iji bie ndụ nkerapụrụ iche, nke ndị na-efe ya na-akwado ya. Ọ gụrụ akwụkwọ na ọdịda anyanwụ na ọ na-ekwukwa ihe odide India. N'ihi ya, ndị ode akwụkwọ ọdịda anyanwụ na ndị India nwere ike nweta akwụkwọ ọgụgụ ya n'asụsụ Bekee. Nwanyị nwanyị France bụ Mirra Alfassa, ma ọ bụ mama ahụ, sonyeere Aurobindo mgbe e mesịrị wee ghọọ onye ibe ya n'ọganihu ime mmụọ. Ọtụtụ n'ime ihe odide ya dabere na nkwupụta a gwara ndị dị iche iche na azịza nye ajụjụ nke ndị na-efe ofufe. Site na isi mmalite ndị a, anyị nwere ike ịkọwa echiche ndị a dị ka ihe dị mkpa na echiche ụwa Aurobindonian:
Dị ka Theosophy, ya mere, nkwenkwe mbụ bụ na ihe niile dị ndụ ma nwee njikọ. Na ihe odide Hindu oge ochie a na-akpọ Ugba, a na-akpọ nke a Brahman, Nke zuru oke.
Iswa dị ndụ na Nnọọ, ma gbagoo na mgbanwe na mbido mmụta.
Dị adị n'etiti zuru oke na ụmụ mmadụ bụ Supermind. Ọ bụghị onye ọbịa n’ebe mmadụ nọ. N'ezie, Sri Aurobindo rụrụ ụka na ọ dị na ihe odide India oge ochie a na-akpọ Vedas. Ọ na - arụ ọrụ dịka eziokwu na uche nke na - enyere ụmụ mmadụ aka ịghọ ụdị dị elu. Aurobindo rụrụ ụka na Supermind na-agbadata n'ụgbọ elu ụwa anyị mgbe anyị na-arịgo n'ógbè dị elu nke mmata ime mmụọ.
Ebumnuche nke onye ahụ ọ bụla bụ ịghọta Supermind n'ime onwe ha site na ntinye ofufe (dịka ntụgharị uche) na ezigbo ọrụ.
Ihe dị mkpa karịa ihe ọ bụla ha nwere ike ime, ndị na-efe ofufe nyefere Sri Aurobindo na mama ahụ, dị ka Chineke na nke zuru oke na aka ha.
Nne na-ezo aka na Shakti ma ọ bụ Chineke nwanyị dị ukwuu na usoro Hindu dị iche iche. Mirra Alfassa dị ka Nne na-egosipụta ike chi a. Ihe ọ na-eme bụ zuru oke. (Sri Aurobindo 1914)
Otu ajụjụ onye ọ bụla maara banyere Tyberg nwere ike ịkọwa n'ụzọ ziri ezi bụ: olee otu o si mee ka usoro abụọ ndị a dị na ndụ ya, Theosophy dị ka ihe ndabere maka ọkara nke ndụ ya, echiche Sri Aurobindo maka ọkara nke abụọ? Tyberg n'onwe ya zoro aka n'okwu a site n'oge ruo n'oge. Ọ ghọtara echiche Sri Aurobindo dị ka mmezu ma ọ bụ mezue Theosophy. Dịka e kwuru n'elu, sistemụ abụọ a abụghị nke abụọ ma kpebie ekweghị na Chineke (dịka echiche nke ọdịda anyanwụ nke Chineke). Ihe niile na-esonye na ịdị n'otu. Usoro sistemụ a nwekwara mmekọrịta dị n’etiti ụwa dịka ọ dị na ụwa ka ọ ga-adị. Ha abụọ na-eji ihe atụ nke evolushọn akọwa otú mgbanwe a site ugbu a gaa n’ọdịnihu ga-adị. Ha abụọ na-asọpụrụkwa ihe ime mmụọ dị elu, ndị Theosophists na Mahatmas ma ọ bụ Nna-ukwu ha, ndị na-efe Sri Aurobindo na Sri Aurobindo n'onwe ya na mama.
Ihe oyiyi ndị a kwere nghọta. Theosophy na-agba mbọ site na South Asia, ọkachasị ndị Hindu, akụkụ Akwụkwọ Nsọ na nkuzi. N'otu aka ahụ, Sri Aurobindo tụkwasịrị obi na ederede ọdịnala ndị Hindu dị ka Upanishads na Vedas. Mana enwerekwa divergences. Theosophy anaghị akụzi ihe ọ bụla dịka Supermind dị ka Aurobindo si kọwaa ya. Ọ bụ ezie na usoro abụọ ahụ na-ahụ cosmos dị ka nke ejiri mmụọ na ihe gwakọta, na Theosophy, nkwalite ụwa a na-eme dị ka usoro usoro cyclic si dị, mgbe Sri Aurobindo ghọtara Supermind ka ọ bụrụ amụma nke ụdị si kpam kpam na ụwa a.
Ememe na omume ndị Judith Tyberg hụrụ bụ ụzọ abụọ dị iche: Theosophical na Aurobindonian.
Theosophical Society, n'ememe omenaala, na mbido gbaziri site na Freemasonry, mana ka ọ na-erule oge Tyberg tozuru oke ịghọta emume ndị dị na Point Loma ọ bụ ihe ajuju etu mmetụta Masonic siri dị. Ihe ndị ọgbọ ya kọrọ bụ emume ndị akwadoro iji kwado nsọpụrụ Chineke na ịdọ aka ná ntị: ntụgharị uche dị mkpirikpi nke a na-eme n'isi ụtụtụ na tupu ị lakpuo n'abalị, na-ahụ oge ịgbachi nkịtị, na ijikọta nkwenye nke mmadụ n'ime usoro ụbọchị. Point Loma Theosophists gbakọtara maka mmemme nke mmụba ọdịbendị na nke ime mmụọ: arụmọrụ egwu nke ọrụ nke nnukwu ndị na-ede akwụkwọ ọdịda anyanwụ, na mmepụta nke Greek oge ochie yana egwu Shakespearean. Ha hụkwara ụbọchị ọmụmụ nke ndị isi Theosophical dị ka Blavatsky na Tingley. Ndị obodo ahụ nwere mmemme na-eme ememme maka ememme ndị America, dịka nke anọ nke July, Armistice Day, Ista, na Christmas (Ashcraft 2002).
Na East-West Cultural Center, [Foto dị n'aka nri] Tyberg lekọtara ọtụtụ mmemme. Ọgụgụ ọha na eze nke Sri Aurobindo na mama m ga-esochi oge ntụgharị uche. Ndị Asia bụ mmụọ na-abụghị Sri Aurobindo na mama m ga-eme ndị ọbịa anya na Center, kwa. Yogi Bhajan (Harbhajan Singh Khalsa, 1929–2004) nke Ahụike, Obi ,tọ, Nzukọ Dị Nsọ (3HO) ama ama nyere ụfọdụ nkuzi na Chögyam Trungpa Rinpoche (1939–1987) nke Buddhist Shambhala. Tyberg gbalitere inwe mmasị n'ịkụ egwú, ịgụ egwú na egwu ndị Hindu. Ndị na-eme ihe nkiri na-agafe ma ọ bụ bi na mpaghara Los Angeles hụrụ ndị nabatara na Center. Ndị a gụnyere ndị ịgba egwu Indira Devi na Dilip Kumar Roy, na onye tabla master Zakhir Hussein (aha ndị a hụrụ na ajụjụ ọnụ nke onye edemede ahụ mere). N'ikpeazụ, ụbọchị dị mkpa n'akụkọ ihe mere eme nke usoro Sri Aurobindo, dị ka ụbọchị ọmụmụ nke Sri Aurobindo na mama, ka a na-ahụkarị kwa afọ (ihe akụkọ dị na Njikọ Aka, magazin maka ndị na-efe Sri Aurobindo na mama.
Ọtụtụ ọnọdụ ime mmụọ nke Tyberg sitere na ịgụ na ịkọwa akụkụ Akwụkwọ Nsọ ndị Hindu, ọ zụlitekwara ọnọdụ ime mmụọ ahụ n'etiti ndị ọzọ, ụmụaka yana ndị okenye, site na nkuzi na Sanskrit. Ọ ga-akuziri ndị mmadụ otu na otu, ma ọ bụ otu ọ bụla ma ọ bụrụ na enwere mmasị. N'iji akwụkwọ nke aka ya, ọ ga-eduzi nwa akwụkwọ ahụ site na ntọala Sanskrit, yana maka ndị chọrọ ịmụkwu omimi, ọ ga-akụzikwara ha ihe.
Ekwesiri ighota, [Image 7 n'aka nri] dabere na nkọwa ahụ dị n'elu, na ememe ahụ na ndụ Tyberg dị jụụ. Nke ahụ bụ, kama ịmegharị ahụ anụ ahụ nke metụtara ihe onwunwe, ma ọ bụ ọbụna nnukwu ememe okpukpe nke chọrọ ka ndị na-ege ntị na-ekere òkè n'ụdị ịbụ abụ na ịgụgharị ọgbakọ, n'ihi na a na-eme arụmọrụ Tyberg na omume ntụgharị uche, na-ege ntị na akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agụpụta, mkparịta ụka nke echiche na ederede ndị ahụ, na ikekwe ụfọdụ na-abụ abụ (lee ihe atụ, "Jyotipriya - A Tribute" ). Styledị ememe a, ọ bụghị nke a na-anụtụbeghị n'akụkụ ndị ọzọ, na-ezo aka na ebumnuche ime mmụọ na ndụ Tyberg: ijikọta nke ndụ mmadụ, na-adọta akụkụ dị iche iche nke onwe, yana ntụgharị uche na mkpali na mmetụta uche mmadụ.
Oge mbu nke ndi ndu okpukpe bu ihe edere site na akwukwo nke onye okacha amara nke German bu Max Weber (1864–1920), onye n’arita uka banyere ikike ato: omenala, ndi ezi uche di na ndi mmadu. Ndị isi ọdịnala na-adabere n'ụkpụrụ dị ogologo oge. Ndị na-eso ụzọ ha na-eche na ndị isi ọdịnala na-achị mgbe niile ka ha na-achị ugbu a. Ejikọtara ikike iwu na oge a, yana ọhaneze. Ndị ndu akọwapụtara n'ụzọ iwu kwadoro na-eji ezi uche amata mkpa nke ndị ha na-edu, wee wezuga ọrụ gọọmentị iji gboo mkpa ndị ahụ. Uzo nke ato nke ochichi, nke ndi oka mmuta banyere akwukwo banyere otutu oge, bu ikike ikike. Onye ndu na-adọrọ adọrọ nwere magnetism nke onwe ya, ma nwee ike kpalie ndị mmadụ ịrụ ọrụ ọnụ, ma ọ bụ lụso ndị iro ọgụ ọnụ. Ndị na-eso ụzọ nke kwenyere na onye ndu natara "onyinye" nke ikike ma ọ bụ ikike site na isi dị elu wuru ikike ndị mmụọ. N'ọmụmụ banyere mmegharị okpukpe ọhụrụ, a na-egosipụtakarị ndị isi na-adọrọ adọrọ dị ka ndị na-emegbu ndị na-eso ụzọ ha. Onye ndu ahụ anaghị eche echiche, ndị na-eso ụzọ na-eduhie n'ụzọ dị mfe (Gerth na Mills 1946: 54).
Ọ bụ eziokwu na enwere ike iji mmụọ nsọpụrụ mezuo uche ndị isi ụka, ma n'okpukpe ọhụụ ma nke hiwere isi. Otú ọ dị, Tyberg adịghị adaba n'ụdị ahụ. O nwere ikike nke onwe, ma ọ nweghị ihe gosiri na isi mmalite dị na ọ jirila ikike ya mee ka ọ dị elu ma ọ bụ manye ndị mmadụ ime ihe megidere akọ na uche ha. O gosipụtara ikike ya dị ka onye nkụzi, nke ọ kwenyere na ya bụ: nke mbụ, nke ikpeazụ, na mgbe niile. Ruo ọtụtụ afọ, malite na Point Loma ma mesịa na East-West Cultural Center, ọ duru ụmụ akwụkwọ na nkuzi ha n'ọtụtụ isiokwu, site na ebe nkịtị ruo na mmụọ. Na mgbakwunye, ụmụ akwụkwọ ya tozuru etozu bịara n’ọgbọ niile, sikwa n ’obodo niile. Ọ dịtụghị ka ọ jụrụ onye ọ bụla nwere ezigbo mmasị maka nghọta ime mmụọ.
Onye na-ekiri ihe na-eme mgbe niile banyere Tyberg nwere ike ikwubi na ya akarịala ịbụ eziokwu. Ọ dị ka ndị ahụ onye America ọkà ihe ọmụma bụ William James (1842–1910) kpọrọ ndị nwere ezi ahụike Iche-iche nke Ahụmahụ Okpukpe (1928). Ndị dị otú ahụ na-enwe obi ụtọ na afọ ojuju n'ọnọdụ ime mmụọ ha. Dị ka o kwesịrị ịdị, ha na-ahapụ mkpa na ọchịchọ ha maka ndị ọzọ. Ta ahụhụ n'ihi mmehie na ihe ndapụta adabaghị n'akwụkwọ ndekọ nke mmetụta uche ha. N’ụzọ niile, ha dị ka ndị ji okpukpe kpọrọ ihe ma nwee afọ ojuju maka ọnọdụ ahụ. Ha gosiri na ha dị iche na Jems na “mkpụrụ obi na-arịa ọrịa.” Nke a bụ onye na-alụso mmehie na nhụjuanya ọgụ na mgba nke titanic nke obi nkoropụ. Ha na-abụkarị ndị dara ada ma ọ bụ ndị dara mbà n'obi. Ha enweghị ike ịhụ ịdị mma nke okike gbara ha gburugburu, ma ọgụ ha na-emerụ ma merụọ ha ahụ (James 1928: 78 ff.).
Tyberg abụghị mkpụrụ obi na-arịa ọrịa, iji okwu James. Ọ dị nnọọ ka ndị nwere ahụike. N'ọtụtụ ajụjụ ọnụ emere ndị nwere ihe ọmụma mbụ banyere Tyberg, echiche dị ukwuu bụ na Tyberg nwere ikike, na-esite n'ime ime mmụọ ya, iji lekwasị anya na ebighi ebi. Mgbe nchegbu na nchegbu nke ndụ ghọrọ ibu arọ, ọ chọtara ụzọ iji gbanwee ihe ndị na-adịghị mma ka ọ bụrụ nke ọma, dịka mgbe ọ hapụrụ Point Loma Theosophical Society. Ọ gara n'ihu na ọrụ ya na nkà ihe ọmụma Sanskrit na South Asia site na ịmalite ọrụ dị ka onye nkuzi nọọrọ onwe ya, na-ekwu okwu n'ụlọ nke ụmụ amaala ndị kpọrọ ya òkù, ma na-agba akwụkwọ ụlọ akwụkwọ n'ụlọ nke ọ bi na ya bụ ọkachamara na Hindu India, na South Asia n'ozuzu.
Ndụ Tyberg enweghị oke esemokwu dịka anyị maara. Imirikiti ndị zutere ya hụrụ ya n'anya ma tụkwasị ya obi, ọkachasị ma ọ bụrụ na ha bụ ụmụ akwụkwọ nọ na klaasị ya ma ọ bụ ndị na-akwagharị mmụọ n'ụzọ ime mmụọ na-achọ nghọta ka ukwuu. Abụọ merenụ kwụpụta, mgbe Tyberg chere ihu siri ike usoro ziri ezi nhọrọ nke a onye ọdịdị. Ha abụọ nwere njikọ na Theosophical akụkụ nke ndụ ya.
Nke mbụ mere mgbe ọ ka bụ nwa agbọghọ ka bi na Point Loma. Tyberg bụ otu n'ime ọtụtụ ụmụ nwanyị ndị mere ihe nkesa mgbe onye ndu Point Loma, Tingley, nabatara ndị mmadụ ụfọdụ ama ama n'ụlọ ya maka nri abalị. Tyberg kọọrọ ndị mụrụ ya ihe ekwuru na nri abalị ndị a, mgbe Tingley nụrụ nke a, ọ machibidoro Tyberg ịga n'ihu dị ka ihe nkesa (Ashcraft 2002: 85-87). O doro anya na Tingley chere na mkparịta ụka ndị a na-eri oriri abalị a bụ nke nwere mmetụta dị nro, na ọ nwere ike imetụta ma ọnọdụ Tingley na ọdịmma ya, ma ọ bụ ahụike nke obodo Point Loma, ma ọ bụ ha abụọ. Mana omume Tingley nwere nnukwu mmetụta na Tyberg. Onye nke ikpeazu jiri ndu ya na-agbalisi ike ibu nwata na ndi okenye nke nne na nna ya na ndi ozo bi na Point Loma choro ka o buru. Ha tụrụ anya ka ntorobịa ha gosipụta ụkpụrụ ndị Victoria: ịmụrụ anya, ezi uche, na ịsọpụrụ mmadụ. Nke a nwere ike ịbụ mgba izizi Tyberg na nghọta dissonance. Nwanyị ahụ ọ kpụrụ akpụ, Katherine Tingley, ajụla Tyberg maka omume na-ekwesịghị ịbịakwute onye ntorobịa Point Loma.
Emechara ka Tyberg hapụghachi ọrụ ya dị ka ihe nkesa. Naanị afọ ole na ole mgbe nke ahụ gasịrị, Tingley nwụrụ na 1929 site na mmerụ ahụ merụrụ ahụ n'ihe mberede ụgbọala, oriri oriri abalị a ma ama wee bụrụ ihe gara aga.
Esemokwu nke abụọ mere mgbe afọ ole na ole gachara. Mgbe onye ndu Point Loma Gottfried de Purucker nwụrụ na 1942, ndị otu ndị ọgbọ, ọkachasị ndị nọ na gburugburu ya, duziri ndị obodo ruo oge dị ka onye ndu ọhụụ ga-ekpughere Mahatmas ma ọ bụ Nna-ukwu. Somefọdụ ndị obodo ahụ kwenyere na onye ndu ọhụụ bụ Colonel Arthur Conger, nwoke agha nke na-ebighi na Point Loma ogologo oge. Na nyocha, esemokwu nke kewara Theosophists bụ na e mere Conger Isi nke Isi nke ngalaba Esoteric (ES). Nke a pụtara na ọ bụ onye ndu ụwa nke nzukọ ahụ bụ isi nke usoro Theosophical, otu nzukọ nke ndị otu ya maara ozi nzuzo na nghọta nke ọtụtụ ndị Theosophists na-enweghị. Ndị isi dị n'ime bụ ndị Mahatmas ma ọ bụ Nna-ukwu, ndị kwenyere na ha na-eduzi ndị Theosophists n'ime mkpebi ndị dị mkpa. Tyberg so na otu ndi otu ES na echeghi na Conger bu onye isi Outer. N’afọ 1946, ọ hapụrụ Covina. O wutere ya nke ukwuu ma wute ya na ụfọdụ ndị ọ maara na ndụ ya niile na-emegide ya. O nwekwara ihe ihere mgbe, mgbe ọ kwagara Los Angeles, ọ nụrụ na e boro ya ebubo ịgbasa akụkọ ụgha banyere Conger. O degaara ya akwukwo ka o kpochapu aha ya. Ebe ọ bụ na ebubo ahụ gụnyere mkparị mmekọahụ, Tyberg were iwe nke ukwuu na ya ga-esonye na ihe dị ka tawdry. Mana o biliri n’elu ya, dịka o degaara nne ya, “Okwu a niile dịka onyinyo m siri pụta na ọkụ” (Judith Tyberg na Marjorie Tyberg, 10 Feb. 1947, Archive, East-West Cultural Center) ).
Ahụmahụ Tyberg na esemokwu esemokwu na Covina ò mere ka ọ daa mbà n'ụzọ ụfọdụ? O siri ike ịmata. Ihe akaebe edeputara ederede egosighi. Ikekwe, agbanyeghị, ebe ọ bụ na ọ bụ onye Victoria na ndụ ya, ọ keghị onye ọ bụla, ma ọ bụrụ na o soro ya, onye ahụ ga-abụrịrị enyi a tụkwasịrị obi nke ga-edebe echiche Tyberg na ntụkwasị obi.
Ọ bụrụ na enwere ihe kachasị mkpa nke Tyberg na-agbasosi ike n'oge ndụ ya niile, ọ bụ ọchịchọ ya iwebata amamihe nke India, yana Asia n'ozuzu ya, nye ndị ọdịda anyanwụ site na ikpughe ederede okpukpe Asia na asụsụ ha. Taa, anyị ga-akpọ ya ụzọ "Orientalist," nke pụtara na onye ntụgharị okwu ọdịda anyanwụ nke ederede Asia na-eweta echiche ha n'ihe odide ahụ. Ndị ọkà mmụta gbasara mgbanyụ ọkụ na-eleda nkọwa ndị Asia anya. Otu n'ime ọnọdụ ndị ama ama nke omume a bụ ngosipụta ọdịda anyanwụ nke Buddha dị ka onye nwere ọgụgụ isi onye kụziri ụkpụrụ omume ọmịiko na ịgọnahụ onwe onye zuru ụwa ọnụ. E wepụrụ Buddha a nke ọdịda anyanwụ dị mkpa, dị ka ọ dị na animation kwụsịtụrụ karịa ọgụ nke obodo Buddha n'ezie. N'okwu nke Tyberg, onye ọwụwa anyanwụ ya nke ketara n'aka Blavatsky bụ ịhụ akụkụ Akwụkwọ Nsọ Hindu dị ka ihe ndabere maka Theosophy. Aha akwukwo nke nyere ya aha di ka onye Sanskritist, Igodo Sanskrit nye Okpukpe Amamihe, na-ekwu ya niile. Sanskrit abaghị uru na n'onwe ya. Ọ baghịkwa uru na-eme ka a mata ihe na omume na echiche ndị India oge ochie. Ọ dị mkpa, dị ka Tyberg si kwuo, n'ihi na ọ na-ekpughe "Okpukpe Amamihe," ya bụ, nkuzi oge niile nke Theosophy. Ọbụna ọ na-ekwu na Okwu mmalite nke akwụkwọ a na olileanya ya bụ na mgbe onye na-agụ ya mụtara okwu Sanskrit, ha ga-aga n'ihu n'ihu na Theosophical ederede nke kachasị mkpa, Blavatsky's Iwu Nzuzo (Tyberg 1940: vii).
Judith Tyberg gbasoro ụkpụrụ, nke pụtara na narị afọ nke iri na itoolu na mmalite narị afọ nke iri abụọ, nke ụmụ nwanyị ọdịda anyanwụ ndị nakweere ọnọdụ ime mmụọ na ọdịnala Eshia, wee bụrụ ndị ọha na eze mara maka nke India. Ha gụnyere onye isi oche nke abụọ nke nne na nna Theosophical Society, onye edemede, na ọkà okwu Annie Besant (1847-1933), Margaret Elizabeth Noble / Sister Nivedita (1867-1911) nke Ramakrishna Movement, na mama n'onwe ya nke Sri Aurobindo ije. Womenmụ nwanyị a gbasoro ọrụ na India, ebe Tyberg gara India maka mkpali na agụmakwụkwọ mana ha biri na United States. Mana n'ụzọ ndị dị mkpa, Tyberg sooro ụfọdụ ụmụ nwanyị kpaa àgwà ụfọdụ. Dị ka ha, ọ bụ onye ọdịda anyanwụ nke mere njem ime mmụọ nke South Asia dị ka a ga-asị na ọ na-abịa ezi ụlọ ya. Dị ka ha onwe ha, ọ bụ onye ọha na eze na-esonye na mmegharị ahụ, site na ederede ederede, okwu, na-enwe nzukọ nkuzi, wdg Nke atọ, ọ dị ka ha n'ịjụ echiche ndị bụ isi na ọdịnala otu mmụọ, dị ka onye okike nke Chineke nke eluigwe na ala, ma ọ bụ mkpa ọ dị ime ka eziokwu nke nhụjuanya kwekọọ na ikike na ikike niile nke Chineke (lee Jayawardena 1955, ọkachasị Akụkụ nke III na nke IV) .
Tyberg bụ onye ọsụ ụzọ [Foto dị n'aka nri] n'ọmụmụ nke Sanskrit na akwụkwọ nsọ Hindu oge ochie dịka Vedas. Ruo n'oge ahụ, mpaghara ndị a fọrọ nke nta ka ọ bụrụ naanị ngalaba nwoke na ọdịda anyanwụ ọdịda anyanwụ. N'India, ọdịnala kwuru na ọ bụ naanị ụmụ nwoke nwere nnukwu mmụọ nwere ike ịmụ akụkụ Akwụkwọ Nsọ Sanskrit. Agbanyeghị, nke a egbochighị de Purucker na ọzụzụ Tyberg, nke mere na ọ mechara bụrụ onye Sanskritist ama ama na nke ọma. Tyberg n'onwe ya ekwughị eziokwu na ọ bụ nwanyị na mpaghara nwoke na-achịkwa. Otu ihe bụ na, ọtụtụ ụmụ nwanyị n'oge ahụ, dị ka ya, bụ ndị ọsụ ụzọ na-arụ ọrụ emechibidoro ha. Maka onye ọzọ, ọ ga-ekwe omume na, n'ihi nghọta nke okike e jiri zụlite ya, Tyberg ahụghị ụdị okike dị mkpa. Na Point Loma Theosophical, nke kwuru na ya ga-aga n'ihu na nkuzi nke Helena P. Blavatsky, okike dị ntakịrị. Mkpụrụ obi dịghachi ndụ dị ka nwoke na nwanyị mgbe ụfọdụ. Ndi nwoke na nwanyi nwere njirimara di nkpa, n’agbanyeghi, nke putara na nkpuru obi etinye n’ime oge enyere dika nwanyi, dika ima atu, oga amuta ihe putara ihe nile dika nwanyi, ya na nwanyi nwere uche di ya n’obi (Ashcraft 2002: 116) .
Agbanyeghi na Judith Tyberg yiri ndi ndu ndi ozo nke ime mmuo nke oge ya, o nyere onyinye puru iche na oge ya. Mgbanwe nke counterculture nke 1960s na 1970s, nke gbanwere ọdịbendị nke ọdịda anyanwụ, tụkwasịrị obi na ntinye ederede Asia, echiche, na ememe. Mgbanwe a jikọtara ihe ndị dị iche iche ka ha wee bụrụ ụzọ ụwa dị iche na nke a nabatarala n'akụkụ ọdịda anyanwụ. Tupu ndị hippies, tupu ịrị elu nke iji ọgwụ ọjọọ eme ihe, tupu njirimara ndị a niile nke oge ahụ na akụkọ ọdịda anyanwụ, Tyberg nọ na-arụ ọrụ mgbe niile na Los Angeles Center, na-eme ka ndị ọzọ mara banyere ihe nketa bara ụba nke South Asia nyere ụwa. Ozugbo mgbanwe ọdịbendị nọ na-aga n'ihu, Ebe Ọwụwa Anyanwụ-West Center bụ akara ngosi na maapụ mgbanwe ahụ. Ọ bụ ezie na ụkpụrụ omume ya adịghị akwado mmebi nke counterculture, Judith Tyberg nọrọ na ọkwa ya ruo mgbe ọ nwụrụ, na-enye ntụziaka na mmụọ nsọ nye onye ọ bụla chọrọ ige ntị.
Image # 1: Judith Tyberg, onye guzobere East-West Cultural Center.
Foto # 2: Childrenmụaka nọ na Raja Yoga School dị na Lomaland, 1911. Foto sitere na Library of Congress, site n'ikike Wikimedia.
Image # 3: Judith Tyberg na-akụzi sanskrit na Mahadum Theosophical, 1943.
Foto # 4: Judith Tyberg, afọ 20, na-eme ihe nkiri na Lomaland, 1922.
Foto # 5: Ọnọdụ nke anọ nke East-West Cultural Center, Los Angeles, 1963.
Foto # 6: Anie Nunnally na Jyotipriya (Judith Tyberg), 1964. Nunnally bụ Onye isi oche nke East-West Cultural Center ugbu a.
Image # 7: Judith Tyberg na mgbe ọ gachara.
Ashcraft, W. Michael. 2002. Dawn nke New Cycle: Point Loma Theosophists na American Culture. Knoxville: Mahadum nke Tennessee Press.
Aurobindo, Sri. 1990. Ndụ nke Ndụ. Osimiri Ejima, WI: Lotus Press. Na mbụ bipụtara na serial na Arya bido n’afọ 1914.
Blavatsky, Helena P. 1988. Ekpughere Isis: Otu Nna-ukwu-ukwu nke ihe omimi nke sayensị na nkà mmụta sayensị oge ochie. Mpịakọta 2. Pasadena, CA: Theosophical University Press. [Nke ebuputara na 1877].
Blavatsky, Helena P. 1988. Isi Nzuzo: Uzo Sayensị, Okpukpe, na Nkà Ihe Ozo. Mpịakọta 2. Pasadena, CA: Theosophical University Press. [Ebu ụzọ bipụtara ya na 1888].
Gerth, HH na C. Wright Mills, ndị ọzọ. 1946. Site na Max Weber: Edemede na Sociology. New York: Oxford University Press.
James, William. 1928 Iche-iche nke Ahụmahụ Okpukpe. New York: Longmans, Green na Co.
Jayawardena, Kumari. 1995. Nwanyị Nwanyị Na-acha ọcha nke Ọzọ: Western Women na South Asia n'oge ọchịchị Britain. London: Routledge.
"Jyotipriya - A utetụ." 2021. Sri Aurobindo Center nke Los Angeles na East-West Cultural Center. Nweta site na https://sriaurobindocenterla.wordpress.com/jyoti/ na 16 February 2021.
Theosophical Society na America. 2021. “Ihe Atọ.” Nweta site na https://www.theosophical.org/about/about-the-society na 16 February 2021.
Tyberg, Judith M. 1940. Igodo Sanskrit nye Amamihe-Okpukpe: Ngosipụta nke Nkụzi Ihe Ọmụma na Okpukpe Ndị Dị na Sanskrit Okwu E Ji Theosophical na Occult Literature. Point Loma, CA: Theosophical University Press.
Tyberg, Judith M. 1947. Akwụkwọ ozi nye Marjorie Tyberg. 10 Febụwarị. Archive. Los Angeles: Ebe Ọwụwa Anyanwụ-West Center. 16
Aurobindo, Sri. 1995. Ihe nzuzo nke Veda. Alaka mmiri, India: Sri Aurobindo Ashram Trust. Na mbụ bipụtara na serial na Arya bido n’afọ 1914.
Ellwood, Robert. 2006. "Theosophical Society." Na Okwu Mmalite nke Okpukpe Ọhụrụ na Ọzọ na America. Vol 3, Metaphysical, New Age, na mmegharị nke Neopagan. Eugene V. Gallagher na W. Michael Ashcraft deziri, 48–66. Westport, CT: Greenwood Press, 2006.
Greenwalt, Emmett A. 1978. Utopia California: Point Loma: 1897 - 1942. Mkpuchi ed. San Diego: Akwụkwọ Loma. Ebipụtara na 1955.
Harvey, Andrew. 1995. "Aurobindo na Ngbanwe nke Nne." Isi nke anọ na Nlaghachi nke nne, 115–54. Berkeley, CA: Frog Ltd.
Mandakini (Madeline Shaw). 1981. "Jyotipriya (Dr. Judith M. Tyberg) Mee 16, 1902 – Ọktọba 3, 1980." Nne India (Febụwarị): 92–97.
Mandakini (Madeline Shaw). 1981. "Jyotipriya (Dr. Judith M. Tyberg) Mee 16, 1902 – Ọktọba 3, 1980 II." Nne India (Machị): 157-62.
Mandakini (Madeline Shaw). 1981. "Jyotipriya (Dr. Judith M. Tyberg) Mee 16, 1902 – Ọktọba 3, 1980 III." Nne India (1981): 210-19.
Tyberg, Judith M. 1941. Nkuzi izizi na asusu Grammar na Sanskrit. Point Loma, CA: Theosophical University Press.
Tyberg, Judith M. 1970. Asụsụ nke Chi: Sanskrit Igodo nke Amamihe India. Los Angeles: Ebe Ọwụwa Anyanwụ-West Cultural Center.